China Desktop mhando isina waya charja DW02 fekitari uye bhizimisi | Lantaisi
DW02 iri isina waya inokurumidza charger ine mhete ye LED iyo inoshandiswa kuchaja nhare mbozha uye mamwe maQi anogoneswa michina. 6mm super slim, premium chitarisiko, ita kuti zvive nyore uye fashoni. Isa maDW02 majaja maviri asina waya muhomwe yako. Iwe unogona kushandisa imwe kubhadharisa yako AirPods nepo imwe yacho kubhadharisa foni yako. Kana iwe unogona kushandisa imwe kumba uye imwe kuhofisi. Iwe unofanirwa kuva nazvo!
DW02 ndeimwe mhando yedesktop rudzi isina waya charger iyo inogona kuiswa pamusoro padesiki, tafura uye kunyangwe chero zvimwe zvinhu 'nzvimbo yekuchaja nharembozha yako zvisina waya.
Kuisa: DC 5V-3A, DC 9V-1.67A, DC 12V-1.5A
Kutengesa kure: 8mm
Standard / Certification: CC / ROHS / CE chitupa
Kuchaja Shanduko mwero: ≧ 76%
Kukura kwechigadzirwa: Ø100 * H6.0mm
Pasuru zvemukati: 1m Type-C dhata mutsara, mushandisi bhuku, mudziyo
Chaji isina waya inoshanda sei? -----
Kuchaja isina waya kunoenderana nekuchaja inductive, uko simba rinogadzirwa nekupfuudza magetsi emagetsi kuburikidza nemaviri mairi kugadzira munda wemagetsi.
Kana iyo inogamuchira magineti ndiro pane mbozhanhare inosangana neyekutumira - kana zvirinani mukati meiyo yakatarwa renji - iyo yemagineti inogadzira magetsi emagetsi mukati mechigadzirwa.
Ino yazvino inoshandurwa kuita yakananga yazvino (DC), iyo inozobhadharisa bhatiri rakavakirwa.
Ndeupi muyero wekuchaja usina waya?
Iyo huru isina waya standard ndeye Qi (inonzi "chee"). Qi chiyero chakave chakagadziriswa neiyo Wireless Power Consortium (WPC) yekutengesa inductive pamusoro penzvimbo dzinosvika ku40mm.
Qi isina waya kuchaja yakagamuchirwa nevakawanda vevakuru vevanogadzira smartphone: Samsung, Apple, Sony, LG, HTC, Huawei, Nokia (HMD), Motorola uye Blackberry. Iri zvakare kuiswa mukati memota dzakawanda izvozvi zvakare - ona pazasi.
Imwe waya yekuchaja isina waya yaive Powermat. Yakanga ichishandiswa nevamwe vatengesi senge Starbucks kugonesa vatengi kuchaja mafoni avo. Asi yakarasa fomati yehondo kana uchida, saka Powermat akataura muna2018 kuti yaizogadzira tekinoroji yekuchaja isina waya inoenderana neQi.
Qi ine matatu akapatsanurwa magetsi, kutanga nesimba rakaderera, zvinova ndizvo zvatiri kutaura nezvazvo pano, zvekuchaja nharembozha. Parizvino pane akati wandei wattages ayo anogona kuiswa kune izvi. 5W ishoma, nepo dzimwe nhare dzinotsigira 7.5W, 10W uye kusvika pa15W uyezve ku30W mune imwe vhezheni yemberi. Nekudaro, makambani ega ega anogona kuvandudza matekinoroji avo ekuendesa nekukurumidza kumhanya isina waya kumhanyisa kumhanya.
Pashure: Desktop mhando isina waya charger DW01
Zvadaro: Desktop Type isina waya charger TS01